Mon, Jun 1, 2020 at 7:04pm
सडक अवरुद्ध भएपछि जाजरकोट र डोल्पामा खच्चडकै भरमा सामान ढुवानी
जाजरकोट, १३ साउन जाजरकोट, डोल्पा जाने आन्तरिक सडक अवरुद्ध भएपछि ढुवानीको विकल्प नहुँदा घोडा तथा खच्चडको प्रयोग पढ्न थालेको छ । डोल्पामा दुई विमानस्थल भए पनि त्यहाँ नियमित रुपमा उडान हुन नसक्दा तथा भाडादर सर्वसाधारणले थेग्न नसकेको कारण घोरेटाहरुमा अझै खच्चडका लस्कर मात्र देखिन्छन् । जाजरकोट र डोल्पामा दैनिक ४०० भन्दा बढी खच्चडले खाद्यान्न, दैनिक उपभोग्यवस्तु र निर्माण सामग्री ओसार्ने गरेको सम्बद्ध..
थाहा पाउनुपर्ने कुरा ! तपाईँका छोराछोरीले दिनमा कति पानी पिउनु पर्छ ?
एजेन्सी, ९ साउन साना बालबालिकामा पानीको मात्रा कम हुन नदिएमा उनीहरुको स्वास्थ्यमा राम्रो प्रभाव पर्छ । विशेष गरी गर्मी याम वा व्यायामपछि पानीको मात्रा शरीरमा कम हुन्छ । बालबालिकामा डिहाइड्रेसन अर्थात पानीको मात्रा कम भएको थाहा पाउने र उनीहरुलाई पानीको वास्तवमा कति चाहिन्छ भन्ने थाहा पाउन सके स्वास्थ्यलाई राम्रो राख्न सकिन्छ । जन्मदा बालबालिकाको शरीरमा तरल पदार्थको मात्रा झण्डै ७५ प्रतिशत हुन्छ ।..
मेकअप अघि र पछिको मुहारमा आकाश-जमिनको फरक, फोटोमा हेर्नुहोस् हैरान हुनुहुनेछ (फोटो फिचर)
एजेन्सी. ४ साउन मानिसहरु किन मेकअप गर्छन् ? सबैले आफ्नो मुहार परिवर्तन गर्ने उदेश्य लिएर मेकअप गर्ने गर्छन् । अझ विशेष गरी महिलालाई मेकअप गरी आफ्नो मुहारमा चमक ल्याउने इच्छा हुन्छ । पुरुषाको तुलनामा मेकअप तर्फ महिलाहरुको लगाव बढी हुने गरेको छ । मेकअपमा आएको बद्लिदो प्रविधिले मानिसको मुहार नै परिवर्त न हुने गरेको छ । ब्राइट साइडले यस्तै महिलाको तस्बिर दिएको..
बाध्यताले बोल्ड बनेकी थिइन् सनी लियोनी, फिल्ममा सनीले टाइटल रोल आफैं गर्ने
एजेन्सी, ३ साउन सनी लियोनीको बायोपिक ‘करनजीत कौरः द अनटोल्ड स्टोरी अफ सनी लियोनी’ पछिल्लो समय चर्चामा छ । फिल्ममा सनीले टाइटल रोल आफैं गरेकी छिन् । डिजिटल प्लेटफर्ममा रिलिज १० भागको वेब सिरिजमा सनीको जीवनका धेरै रहस्यहरु खुलेका छन् । यी रहस्य अहिलेसम्म दर्शकलाई थाहा थिएन । यस्तै एउटा कुरा सनीको पहिलो कमाइसँग जोडिएको छ । जब सनीको परिवारको आर्थिक..
अब राजनीतिमा बलिउड अभिनेता रितेश देशमुख लोकसभा चुनाव लड्दै
एजेन्सी, ३२ असार फिल्ममा राम्रै सफलता पाएका बलिउड अभिनेता रितेश देशमुख अब राजनीतिमा पनि होमिएका छन् । उनले आफ्ना बुवाको विरासतलाई जोगाउँदै भारतीय लोकसभा २०१९ को चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् । खबर अनुशार रितेश भारतीय कांग्रेस पार्टीको तर्फबाट सन् २०१९ को लोकसभा चुनवामा लड्दै छन् । बलिउड अभिनेताबाट राजनेता बन्न लागेका रितेशको यात्रा कस्तो हुन्छ ? त्यो भविष्यले बताउला । सन् २०१६..
के तपाईको घर वरपर लामखुट्टेको बिगबिगी छ ? त्यसोभए यी बोटबिरुवा रोप्नुहोस् !
एजेन्सी, ३१ असार लामखुट्टेको टोकाइबाट डेङ्गु र मलेरियाजस्तो खतरनाक रोग लाग्ने गर्छ। यसलाई टाढा भगाउन हामीले थुप्रै विषादि तथा मच्छर–धूप प्रयोग गर्छौ जसले स्वास्थ्य र सम्पत्तिमा क्षति पुर्‍याउँछ। तर लामखुट्टे आतङक हटाउन हामीले बगैंचामा यस्ता बोटविरूवा लगाउन सक्छौं। घर वरपर तथा बगैंचामा तुलसी, सयपत्री, रोजमेरी र ल्वाङको बोटबिरुवाहरू लगाएर लामखुट्टेबाट जोगिन सक्छौं। सयपत्री (गेन्दा) फूलको गन्ध अत्यन्त तिखो हुन्छ र यसको आसपास..
राउटेलाई पहिलो पटक परिचयपत्र वितरण, खाद्यान्न र पैसा पाए अझै खुशी हुने भनाई
सुर्खेत, ३१ असार पश्चिम नेपालमा फिरन्ते जीवन बिताउँदै आएको राउटे समुदायलाई पहिलो पटक स्थायी परिचयपत्र प्रदान गरिएको छ । कर्णालीप्रदेश अन्तर्गतको दैलेख जिल्लाको गुराँस गाउँपालिका–८ स्थित पातले खोलामा बसोबास गर्दै आएका राउटे समुदायका नागरिकलाई गाउँपालिकाले पहिलो पटक स्थायी परिचयपत्र वितरण गरेको हो । स्थायी परिचयपत्रका आधारमा राउटे समुदायले अबदेखि सामाजिक सुरक्षाभत्ता पाउने उक्त गाउँपालिकाका अध्यक्ष खेमराज ओलीले बताए । उक्त परिचयपत्रमा नाम,..
यी हुन् बढ्दो उमेरसँगै महिलाहरूले गर्ने १२ गल्ती­­­­­­हरु ! थाहा पाउनुहोस् ...
काठमाडौँ, २४ असार हरेक मानिसले आफ्नो उमेर बढ्दै गएको कुरालाई सहजतापूर्वक लिनुपर्छ । त्यसको लागि आफूभित्र आत्मविश्वास र संसारलाई आफ्नै नजरले हेर्ने तरिका हुनुपर्छ । यस्तो अवस्थामा तपाईको आफ्नो जीवन अनुभवले पनि धेरै कुराहरू सिकाउँछ र गल्ती गर्नबाट रोक्छ । तर, धेरै वर्षको ज्ञानको बाबजुद पनि स्वस्थ र आकर्षक रहने मामिलामा तपाईबाट कहिलेकाहीँ केही गल्ती हुन सक्छ । तपाई उमेर बढ्दै जाँदा पनि..
घटेको तौल बढाउन सकिन्छ तर बढेको तौल घटाउन सकिँदैन, किन ?
एजेन्सी, १५ असार मानिसहरू प्रत्येक दिन तौल कम गर्नकै लागि विभिन्न उपाय अपनाउने गर्छन् । कोही खानै छोड्छन् त कोही क्यालोरी रहित खानेकुरा खान सुरु गर्छन् । यति गर्दागर्दै पनि तौल कम नहुँदा मानिसहरू धेरै नै निराश हुने गर्छन् । उनीहरू सोच्ने गर्छन्, तौल कम गर्न आखिर के गर्ने ? यस्ता अनेकौं प्रश्नको जवाफ त हामीसित छैन तर केही कुराका भने अवश्य..
शारीरिक स्वाथ्य र तन्दुरुस्तीका लागि योग गर्दै हुनुहुन्छ ? यी कुरा ख्याल गर्नैपर्छ .....
एजेन्सी, ११ असार तपाईंलाई थाहा छ, शारीरिक स्वाथ्य र तन्दुरुस्तीका लागि योग सर्बोत्तम विकल्प हो । हाम्र ऋषिमुनीहरुले योगको विकास गरेका थिए, जसलाई उनीहरुले जीवन पद्दतीसँग पनि जोडे । वास्तवमा नियमित योग गर्ने मानिस सधै तन्दुरुस्त, फुर्तिलो र जवान हुन्छ । यो कुरा त तपाईं स्वयम् अनुभव पनि गर्न सक्नुहुन्छ । योगले शरीरलाई चुस्त, फुर्तिलो बनाउँछ । शरीरमा रक्त प्रवाह राम्ररी हुन्छ..
पेसाले पशु प्राविधिक, जसको दुर्लभ चरा खोज्दै दिन बित्ने गर्छ
जाजरकोट, ८ असार बारेकोट गाउँपालिका–५ तोलखानका ४९ वर्षीय गोविन्दबहादुर सिंह पेसाले पशु प्राविधिक छन् । एकतीस ३१ वर्षदेखि पशु प्राविधिकको रूपमा सरकारी सेवामा कार्यरत उनि गत ५ वर्षदेखि जाजरकोटका जंगलमा दुर्लभ चराहरुको बासस्थान खोज्दै हिँडेका हुन् । विश्वमा दुर्लभ र लोपोन्मुख मानिएका चरा र जनावरको खोजीमा रातदिन सक्रिय गोविन्दलाई आफ्नो जीवन र जागिर भन्दा पंक्षी सरंक्षणमा मात्र चिन्ता छ । सन् २०६९ फागुनमा..
‘सेल्फी डे’ का लागि ‘सेल्फी एक्स्पर्ट’का केही टिप्स्हरु, जसले बनाउने छ तपाईंलाई थप लोकप्रिय...
काठमाडौं, असार ०८ । अहिले युवा पुस्तामाँझ केही ‘ट्रेण्डिङ’ छ भने त्यो हो – सेल्फी । कुनै पनि अवसर वा उपलक्ष्यमा आफ्नो क्रियाकलाप वा अवस्थाका बारेमा जानकारी दिने रमाइलो माध्यमकारुपमा समेत अहिले सेल्फीलाई लिने गरिन्छ । सामाजिक सञ्जालको बढ्दो उपयोगिता र प्रयोगले यसमा उल्लेख्य भुमिका खेलेको कुरा नकार्न सकिन्न । यही ट्रेण्डलाई पछ्याउँदै मोबाइल निर्माता कम्पनीहरुले आफ्ना नयाँ उत्पादनहरुमा विशेष गरी..
कल्ले के गर्छ ? पायसी सबैले आफ्नै पेट भर्छ ।।, सारंगी रेटेरै बिताए दिलबहादुरले ४० वर्ष
बेनी, म्याग्दी, ७ असार ‘आयो गयो फेरियो व्यवस्था । आफ्नो भने उस्तै छ अवस्था ।। कल्ले के गर्छ ? पाय‘सी सबैले आफ्नै पेट भर्छ ।। गुल्मीको वडागाउँ घर बताउने ५७ वर्षीय दिलबहादुर गन्धर्वले सारंगी रेट्दै यो गीत गाउँदा म्याग्दीको मंगला गाउँपालिका–४ बरङ्जामा धेरैका आँखा रसाए । २०३५ सालमा १७ वर्षको उमेरदेखि सारंगी भिरेर विभिन्न जिल्लाका गाउँगाउँमा गीत गाउँदै निस्केका गन्धर्वका तीन छोरी, एक छोरा..
करीब ३० लाखको लागतमा महालक्ष्मीको प्रशोधित शुद्ध तोरीको तेल बजारमा
बागलुङ, ६ असार महालक्ष्मी तेल उद्योगले प्रशोधित शुद्ध तोरीको तेल बजारमा ल्याएको छ । उद्यमी सुवास राजभण्डारीको एकल लगानीमा खुलेको उक्त उद्योगले दैनिक एक सय लिटरसम्म तेल उत्पादन गर्ने गरेको छ । धवलागिरि क्षेत्रका उपभोक्तालाई लक्ष्य गरी तेल उद्योग सञ्चालन गरेको उद्यमी राजभण्डारीले बताए । आधुनिक उपकरणजडित जिल्लाकै पहिलो उद्योग भएको उनले बताए । तोरी पेल्न र शुद्धीकरणको लागि इटालीयन प्रविधिका ‘स्ट्रेलर’ र..
वोर्ल्डकप हेराईले बढाउन सक्छ उच्च रक्तचाप, यी उपायहरु अपनाउनुहोस्
एजेन्सी, ४ असार तपाईं रातभर जागा बसेर फुटबल हेरिरहनुभएको होला । फुटबल हेरिरहँदा केही स्न्याक्स पनि खाइरहनु भएकै होला । रातभर बस्ने, स्न्याक्स खाने भएपछि मदिरा किन छुट्थ्यो ? केही न केही पिइरहनु भइरहेकै होला । यी आनीबानीले क्षणिक मनोरञ्जन दिन्छ नै । तर, रोग पनि निम्त्याउँछ । अनिन्द्रा रातभर बसेपछि तपाईंको निन्द्रा पुग्दैन । जति सुत्नुपर्ने हो, त्यो समय पाउनुहुन्न । अर्कोतर्फ तपाईंको..
हामी कम्तीमा पनि ७ घन्टा सुत्नैपर्ने हुन्छ तर १० घन्टाभन्दा धेरै सुत्ने बानीले यि राेग निम्त्याउछ !
एजेन्सी, १ असार हामी रातमा कम्तीमा पनि सात घन्टा सुत्नैपर्ने हुन्छ । प्रर्याप्त नसुत्दा स्वास्थ्यमा निकै नै हानी पर्दछ । आवश्यक भन्दा धेरै सुत्नुभयाे भने पनि स्वास्थ्यमा हानी पुग्नुका साथै विभिन्न प्रकारका राेगहरू लाग्छ । १. मुटुसम्बन्धि रोग विभिन्न अनुसन्धानबाट दैनिक ८ घण्टा सुत्ने मानिसहरूलाई मुटुसम्बन्धि रोग लाग्न सक्ने सम्भावना ४६% रहेको पत्ता लागेको थियो भने ८घण्टा भन्दा बढि सुत्नेहरूलाई ४ गुणा बढि..
दीपिकाले पूर्वप्रेमीलाई बिर्सन सकिनन् ! रणवीर सिंहसंगको बिहे टार्दै
एजेन्सी,२८ जेठ भारतीय संचार माध्यममा चासाेकाे विषय बनेकाे छ नायक रणवीर सिंह र नायिका दीपिका पादुकोणकाे बिहे । उनीहरूकाे बिहेकाे मिति सरिरहँदा रणवीर-दीपिकाकाे बिहे सेप्टेम्बरमा हुने, दुबैका परिवार पनि राजी छन् भनेर पछिल्लो समय भारतीय मिडियामा भाइरल भएको थियो। तर अाजभाेली उनीहरूको विवाह पक्का नभइसकेकाे भन्ने अर्को समाचार आएको छ। समाचारअनुसार रणवीर सिंह दीपिकासँग पूरै समर्पित छन् र छिट्टै विवाह गर्न आतुर छन्।..
सुन्दर अनि स्वस्थ छालाका लागि पानी पिउनु किन अावश्यक छ ?
काठमाडौँ, २५ जेठ पानी मानव स्वास्थ्यका लागि अत्यावश्यक छ । पानीविना शरीरको कुनै पनि अंग बाँच्न सक्दैन । स्वस्थ जीवनका लागि दैनिक पर्याप्त मात्रामा पानी पिउन जरुरी हुन्छ । पानीले थुप्रै रोगबाट त बचाउँछ नै, छालाको समस्या पनि समाधान गर्छ । पानीले छालालाई चम्किलो राख्न मद्दत गर्छ । यसले अनुहारको चमक बढाउँछ । पानीको कमीले छाला ड्राई हुन्छ । त्यसैले सुक्खापन र चाउरीपनाबाट..
बजारको माग अनुसार माटाका भाँडाकुँडा बनाई राम्रो कमाई गर्दै नुवाकोटका कुमाल समुदाय
त्रिशूली,नुवाकोट, २३ जेठ जेठ जिल्लाका कुमाल समुदायले बजारको मागलाई ध्यानमा राखेर बनाएका माटोका भाँडाकुँडाबाट मनग्ये आम्दानी गरिरहेको बताएका छन् । बजारको अभावका कारण नभई गतिलो माटोको अभावका कारण धेरै कुमाल परम्परागत पेशाबाट पलायन भए पनि पुख्र्यौली पेशालाई निरन्तरता दिइरहेकाले माटोका भाँडाको बिक्रीबाट पनि कमाई राम्रो भइरहेको बताएका हुन् । माटो पाउन मुस्किल हुन थालेपछि भाँडा बनाउनै छाडेका जीतबहादुर कुमालले स्थानीय सरकारले कुमाललाई सहज..
डोको बुनेर मासिक २५ हजार आम्दानी गर्दै सत्तरी बर्षीय विक
रामपुर, पाल्पा, २२ जेठ पाल्पाको रामपुर नगरपालिका–७, किसानवारी बस्ने ७० वर्षीय विष्णु विकले डोको बुनेर नौ जनाको परिवारको गुजारा चलाउँदै आएका छन् । उमेरले डाँडापारिको घाम बनेका विकको डोको बुन्ने कार्यमा जोश जाँगर भने जवानी अवस्थाको जस्तै देखिन्छ । बिहान उठेदेखि रात नपरुञ्जेलसम्म डोको बुनेर दिन बितेको उनलाई पत्तो छैन । “डोको बुन्ने कामले उमेर ढल्कँदै गएको ख्यालै भएन, अझै पनि जवानी..
बुद्दि तामाङ चलचित्र ‘मट्टिमाला’मा रजनीसँग रोमान्टिक सिन गर्दै
एजेन्सी,२१ जेठ कलाकार बुद्दि तामाङलाई दर्शकले कमेडी भूमिकामा मात्र हेर्दै आएका छन् । तर, यसपटक भने उनी नायिकासँग रोमान्स गर्दै हिरोइज्म देखाउने तयारीमा छन् । जेठ २५ गतेबाट रिलिज हुन लागेको चलचित्र ‘मट्टिमाला’मा बुद्दिको यस्तै रोमान्टिक अवतार देख्न सकिन्छ । टेके पौरखी राइको निर्देशनमा तयार भएको यो चलचित्रले कमेडी र सस्पेन्सलाई देखाउन खोजेको छ । चलचित्रमा बुद्दि तामाङ, रजनी गुरुङ, पि्रयंका कार्की,..
जापानीहरु किन लामो आयु बाँच्छन् ? यस्तो छ उनीहरुको जीवनशैली :
एजेन्सी, १८ जेठ संसारमा सबैभन्दा लामो आयु कुन देशका बासिन्दाको छ ? जबाफ, जापान । कसरी ? यसको जवाफ भने एक वाक्यमा टुंगिदैन । विश्वमै सबैभन्दा लामो आयु बाँच्नेमा जापानका बासिन्दा पहिलो नम्बरमा छन् । जापान एक यस्तो देश हो जहाँ एक पुरुष औसत ८० बर्ष सम्म बाँच्छन् भने महिला औषत ८६ बर्षसम्म । यो औसत आयु अन्य मुलुकको भन्दा बढी हो । आखिर के..
गर्मीमा कस्तो हेयर स्टाइल अपनाउंदा उचित हुन्छ ? जानिराखौं आकर्षक देखिने विभिन्न उपायहरु :
एजेन्सी, १५ जेठ कपालले नै मानिसलाई सुन्दर देखाउने गर्छ । कपालकै कारण मानिसको व्यक्तित्व पनि आकर्षक देखिन्छ । यही कुरालाई बुझेर नै हिजोआज महिलाहरू लुगाको साथमा कपाललाई समेत आकर्षक देखाउन विभिन्न उपाय अपनाउने गर्छन् । गर्मीमा कपाललाई खुला राख्न नमिल्ने र कुनै आर्कषक हेयर स्टाइल पनि बनाउन नमिल्ने हुँदा धेरै महिलालाई आफ्नो कपालको स्याहार गर्न कठिनाइ हुने गर्दछ । तपाईंलाई पनि यस्तो..
सुगन्धा मिश्रालाई चुम्बन गरेर विवादमा घेरिएका थिए जोन अब्राहम, उनका अन्य विवादहरू
एजेन्सी, १३ जेठ नायक जोन अब्राहमको फिल्म ‘परमाणुः द स्टोरी अफ पोखरण’ शुक्रबार रिलिज भएको छ । फिल्मले राम्रै व्यापार गरिरहेको बताइएको छ र १५ वर्षको फिल्म करियरमा जोनले करिब ४५ वटा फिल्ममा काम गरेका छन् । यद्यपी, नका धेरैजसो फिल्ममा बक्स अफिसमा खासै राम्रो गर्न सकेको छैन । १] फिल्म ‘धूम–टु’ मा ऋतिक रोशनलाई साइन गरेपछि जोन अब्राहमले फिल्मका निर्माता आदित्य..
सुन्दा अचम्म लाग्ला ! ९० किलोकी सोनाक्षीले घटाइन् ३० केजी बराबरको तौल
एजेन्सी,११ जेठ भारतीय चर्चित सुन्दरी नायिका सोनाक्षी सिन्हाले आगामी फिल्म ‘दबंग ३’ का लागि भारी मात्रामा तौल घटाएकी छिन् । ९० किलोकी सोनाक्षीले ‘दबंग ३’ का लागि मात्रै भनेर ३० केजी बराबरको तौल घटाएको भारतीय मिडियाहरुले उल्लेख गरेका छन् । उनले आफ्नो ३० केजी तौल घटाएपछिको आफ्नो पछिल्लो लुकको फोटो इन्स्टाग्राममा शेयर गरेकी छिन् । फिल्मका निर्देशक अरबाज खान र निर्माता प्रभुदेवाले..
राउटे परिवारको दुखेसो: भत्ता नपाएको आठ महिना भयो
ब्रह्मदेव, कञ्चनपुर, ८ जेठ यहाँ बसोबास गर्दै आएका लोपोन्मुख राउटे जातिका तीन परिवारले विगत आठ महिनायता भत्ता पाएका छैनन् । सरकारले राउटेलाई मासिक रु दुई हजारका दरले भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो । विगत आठ महिनादेखि भत्ता नपाएपछि आर्थिक अभाव झेल्नु परेको राउटे परिवारको गुनासो छ । झण्डै पाँच लाख जनसंख्या भएको कञ्चनपुरमा तीन परिवारमात्रै राउटे समुदायको बसोबास छ । भीमदत्तनगरपालिका–९ खल्लामसेट्टीमा दुई..
उमेरले ५१ बर्ष पुगिन् माधुरी दिक्षित, अझै कसरी देखिन्छिन् यति जवान ?
एजेन्सी, जेठ ६ बलिउडकी व्युटी क्विन माधुरी दिक्षित उमेरले ५१ वर्षमा प्रवेश गरेकी छिन् । बलिउडमा लामो समय एक छत्र राज गर्न सफल नायिका माधुरी दिक्षित जवानीमा जति सुन्दर तथा जवान देखिन्थिन्, ५१ औ वर्षमा प्रवेश गरिरहँदा पन उिनको सुन्दरता पहिलेको भन्दा कम भएको छैन । बरु झन् झन् निखारिदो छ । यही सुन्दरताकै कारण माधुरी दिक्षित आज पनि लाखौ फ्यानको मनमा..
पहिले कोरिया जान तयार युवा अहिले मःमः बेचेर गर्छन मासिक तीस हजारसम्म बचत !
भद्रपुर , ४ जेठ भद्रपुर नगरपालिका– ६ का सन्देश रिजालले कनकाई क्याम्पस विर्तामोडमा स्नातक तह पढ्दापढ्दै मःमः बेच्न थालेका हुन् । रिजालले दुई वर्षदेखि मःमः यहाँका विभिन्न बजारमा बिक्री गर्दैआएका छन् । मःमः व्यवसाय शुरु गर्नुभएका रिजाल अहिले पनि कनकाई क्याम्पसमा स्नातकोत्तर तहको व्यवस्थापन संकायमा अध्ययनरत छन् । पढ्दा पढ्दै कोरिया जान दुई पटकसम्म इपिएस परीक्षा दिएका उनि दुबैपटक अनुत्तीर्ण भए ।..
विदेशमा जीवनको केहि पल बिताएर फर्किएका युवाले गरे उद्योग सञ्चालन !
बाबियाचौर, म्याग्दी, ३ जेठ विदेशबाट फर्किएका युवाले वातावरण प्रदूषण कम गर्न काम नलाग्ने टायरलाई प्रशोधन गरेर घरायसी सामान निर्माण गर्ने उद्योग सञ्चालन गरेका छन् । जलजला गाउँपालिका–३ मल्लाजका दिपेश केसी, रघुगंगा गाउँपालिका–२ भगवतीका सुगम खत्री र डेनिश थापाले टायरबाट हस्तकलाका सामग्रीसँगै घर, रेष्टुराँ, बगैँचा र होमस्टेका लागि सजावटका सामग्री निर्माण गर्ने उद्योग सञ्चालन गरेका हुन् । जलजला–८ लस्तीमा १० रोपनी जग्गा भाडामा..
बादी समुदायको जीवनशैली परिवर्तन, पहिले नाचगान गरेर जीविकोपार्जन् अहिले व्यापार र कुखुरापालन !
अछाम, १ जेठ साँफेबगर नगरपालिकामा बसोवास गर्दैआएका बादी समुदायको जीवनशैली फेरिँदै गएको छ । सुल्पा, मादललगायत सामग्री बनाएर गाउँ÷गाउँ गएर बेचेर तथा नाचगान गरेर जीविकोपार्जन गर्दे आएका बादीले अहिले आफ्नो पेशा परिवर्तन गरेका छन् । साँफेबगर नगरपालिका–४ मष्टामाण्डौँको बूढीगंगा नदीको किनारमा बसोवास गर्दे आएका उनीहरुले अहिले व्यापार र कुखुरापालन गर्दैआएका छन् । वडाले बादीका दुई परिवारलाई आयआर्जनका लागि रु ५०÷५० हजार सहयोग गरेको..
Results 744: You are at page 22 of 25